MX-19.3: MX Linux, ny isa 1 DistroWatch dia nohavaozina | Avy amin'ny Linux
Omaly, November 11 2020 andro tsara ho an'ireo liana rehetra izany Linuxers izay nampiasan'izy ireo sy / na fanarahana ny làlan'ny MX Linux, la GNU / Linux Distro efa ela izay, voalohany indrindra ao amin'ny ambony avy amin'ny tranonkala malaza an'ny DistroWatch.
La kinova na fanavaozana Navoaka tamin'ny anarana «MX-19.3»Mitondra zava-tsy ampoizina mahafinaritra sy vaovao mahasoa izay holazainay amin'ity gazety ity.
MX Linux: Mitohy mitarika ny laharana DistroWatch miaraka amin'ny fahagagana maro kokoa
Alohan'ny hidirany feno haneho hevitra momba ny vaovao tafiditra ao MX-19.3, mendrika ny faritana fohifohy ho an'ireo izay tsy mpampiasa na mpanaraka an'i MX Linux, izay:
"Ny GNU / Linux Distro dia niara-niasa tamin'ny fiaraha-monina antiX sy MX Linux. Ary izy dia ao anatin'ny fianakavian'ny Operating Systems izay natao hanambatra solosaina kanto sy mahomby miaraka amin'ny fahamarinan-toerana avo sy fampisehoana matanjaka. Ireo fitaovana misy sary dia manome fomba mora hanatanterahana asa maro isan-karazany, raha Live USB sy lova-tsary lova avy amin'ny antiX kosa dia manampy portability mahatalanjona sy fahaizana remastering tena tsara. Ho fanampin'izay, manana fanohanana be dia be azo alaina amin'ny alàlan'ny horonan-tsary, antontan-taratasy ary forum mahafinaritra be izy".
Eny, rehefa avy namaky ity boky ity ianao dia te hahafantatra bebe kokoa MX Linux, manasa anao izahay hamaky ny anay lahatsoratra mifandraika farany momba ny fahasambarana GNU / Linux Distro, ao amin'ny rohy etsy ambany:
1 MX-19.3: fanavaozana ny Novambra 2021
1.1 Inona no entin'ny MX-19.3 antsika indray?
1.2 Ahoana raha efa mampiasa MX-19.X na MX-18.X aho?
MX-19.3: fanavaozana ny Novambra 2021
Araka ny filazan'ny mpamolavola azy, MX-19.3 es:
"Ny fanavaozana fahatelo an'ny MX-19, izay misy ny fanitsiana bibikely sy ny fanavaozana ny fampiharana hatramin'ny kinovan'ny MX-19 tany am-boalohany. Raha efa mihazakazaka MX-19 ianao dia tsy ilaina ny mamerina azy io indray. Ny fonosana rehetra dia misy amin'ny alàlan'ny fantsom-panavaozana mahazatra".
Inona no entin'ny MX-19.3 antsika indray?
Ao amin'ny Blog do tranokala ofisialy tanisainay ireto manaraka ireto inona no vaovao momba ny MX-19.3 avy amin'ny maro hafa ao anatin'izany:
Ho an'ny kinova mahazatra an'ny MX-19.3 (32-bit sy 64-bit) ny kernel farany avy any GNU / Linux Debianizany hoe, ny Kernel 4.19. Miaraka amin'ny tsy fitovizany, ankehitriny dia havaozina ho azy ny kernel miaraka amin'ireo loharano Debian, amin'ny alàlan'ny default. Raha, ho an'ny sampan'ny ISO AHS (Supporting amin'ny Hardware Advanced) ary ny ISO ambanin'ny KDE Plasma, a Kernel 5.8, latabatra 20, ary fonosana firmware vaovao nohavaozina.
Ho an'ny kinova sy ISO rehetra dia misy ny fanavaozana farany azo avy amin'ny Debian GNU / Linux 10.6 (Buster) ary Repositories an'ny MX.
Ny fampiharana voalohany dia ho avy amin'ity andiany manaraka ity:
TABELA: 18.3.6 sy 20.1.8 ho an'ny ISO AHS.
Kernel Debian: 4.19 sy 5.8 ho an'ny ISO AHS.
Browser Firefox: 82
Mailaka an'ny mpanjifa Thunderbird: 68.12.0
Office suite: LibreOffice 6.1.5 miampy fanamboarana fiarovana.
Na izany aza, ao amin'ny Tahiry MX, dia toy ny mahazatra fampiasa ivelany maro hafa toa ny LibreOffice 7.0 ary teratany MX, avy amin'ny 19.2 version, anisan'izany ireto azo lazaina ireto:
Raha mila fampahalalana bebe kokoa mifandraika amin'ny MX-19.3 sy DistroWatch kitiho ity manaraka ity rohy.
Ahoana raha efa mampiasa MX-19.X na MX-18.X aho?
Raha toa ianao ka efa mpampiasa an'io miavaka io GNU / Linux Distro, aza adino ny mamaky ity rohy manaraka ity momba ny fomba fanatanterahana ny fizotran'ny fanavaozana azy, hahazoana fomba fifindra-monina mahomby: Fifindra-monina MX Linux.
Ary raha tsy izany ianao, mpampiasa an'i MX Linux, aza entina mitondra ny anarany kaody voalohany "Duckling ratsy tarehy" ary ny Desktop minimalista miorina amin'ny XFCE, satria, miaraka amin'ny fahasambarana GNU / Linux Distro y Tontolo iainana Desktop, azonao atao ny manao fanamboarana sy fanatsarana miavaka, toa ilay hitanao, amin'ny sary eo ambony eo ihany. Ary avy eo azonao atao ny mamadika izany rehetra izany ho a respin (mivantana) mivantana, azo alefa ary mivantana, mety tsara ampiasaina a Familiana penina.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «MX-19.3», ny kinova vaovao na fanavaozana misy an'ny MX Linux, la GNU / Linux Distro izay mbola mitana ny laharana voalohany amin'ny ambony avy amin'ny tranonkala malaza an'ny DistroWatch; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » MX-19.3: Nohavaozina ny MX Linux, DistroWatch laharana 1
PLATYPUS: fanafihana vaovao izay misy fiatraikany amin'ny INTEL sy AMD